အတွင်းပိုင်းပြင်ပတွင် LED ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်အရောင်နှင့်ကြည့်ရှုထောင့်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည် - မိုးလုံလေလုံပြင်ပတွင် ဦး ဆောင်ဗီဒီယို display မျက်နှာပြင်ထုတ်လုပ်သူ
အတွင်းပိုင်းပြင်ပတွင် LED ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမျက်နှာပြင်အရောင်နှင့်ကြည့်ရှုထောင့်ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
အရောင်အသွေးစုံလင်သော LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အရောင်သည် 800cd / m2 အထက်ရှိရမည်, နှင့်၏တောက်ပ ပြင်ပတွင်အရောင်အသွေးစုံလင်သော LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင် အထက်ဖြစ်ရမည် 1500?cd / m2 သည် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ပုံမှန်ပြသမှုကိုသေချာစေရန်, မဟုတ်ရင်သူကမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောက်ပမှုအရမ်းနိမ့်လို့ပါ. ပြသထားသည့်ပုံကိုရှင်းပါ. ပတ်ဝန်းကျင်အလွန်တောက်ပလျှင်, ကျေးဇူးပြုပြီး LED (သို့) နောက် projection ကိုအရင်သုံးပါ. အလင်း၏အဆင့်ကိုအဓိကအားဖြင့်သေဆုံးသောအရည်အသွေး၏အရည်အသွေးဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။ ကြည့်ရှုထောင့်၏အရွယ်အစားသည် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏ကြည့်ရှုရန်နေရာအတွက်နေရာပမာဏကိုတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်, ဒီတော့ပိုကြီးလေပိုကောင်းလေ. ကြည့်ရှုထောင့်၏အရွယ်အစားကိုအဓိကအားဖြင့် LED ချစ်ပ်မှဆုံးဖြတ်သည်.
1. အဖြူရောင်ဟန်ချက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြူရောင်ဟန်ချက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏အရေးအကြီးဆုံးအညွှန်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အရောင်သိပ္ပံ၌တည်၏, ဘယ်အချိန်မှာအနီရောင်၏သုံးမူလတန်းအရောင်များ၏အချိုး, အစိမ်းနှင့်အပြာသည် 1:4.6:0.16, စင်ကြယ်သောအဖြူရောင်ပြသပါလိမ့်မည်. အမှန်တကယ်အချိုးအနည်းငယ်သွေဖည်ရှိလျှင်, အဖြူချိန်ခွင်လျှာတစ်သွေဖည်ရှိရလိမ့်မည်. အဖြူရောင်ဟန်ချက်အရည်အသွေးကိုအဓိကအားဖြင့် LED ချစ်ပ်မှဆုံးဖြတ်သည်. အဆိုပါချစ်ပ်သည်အရောင်မျိုးပွားခြင်းကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်
2. Color reducibility အရောင်လျှော့နိုင်သော LED သည်အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်၏အရောင်လျှော့ခြင်းကိုဆိုလိုသည်. အဲဒါပါပဲ, LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်တွင်ဖော်ပြထားသောအရောင်သည်ပြန်ဖွင့်သည့်အရင်းအမြစ်၏အရောင်နှင့်အလွန်ကိုက်ညီရမည်, ပုံ၏စစ်မှန်မှုကိုသေချာစေရန်.
3. mosaic လားသေသေခြာခြာဖြစ်ရပ်မှန် mosaic ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းတောက်ပနေသောအနက်ရောင်လေးခုသို့မဟုတ် LED အီလက်ထရောနစ်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာတဲ့အနက်ရောင်လေးတွေကိုရည်ညွှန်းသည်။, module တစ်ခု necrosis ၏ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်. သေဆုံးသောနေရာအရေအတွက်ကိုအဓိကအားဖြင့် LED ချစ်ပ်၏အရည်အသွေးဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်.
4. အရောင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအရောင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုရှိမရှိရှိမရှိသေးငယ်တဲ့inရိယာထဲမှာအရောင်မရှိခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်; အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာ control IC နှင့် power supply ဖြစ်သည်, နှင့်ထိန်းချုပ်မှု circuit ကိုဝါယာကြိုးများ၏အရည်အသွေး.
5. LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အသွင်အပြင် LED အီလက်ထရောနစ်မျက်နှာပြင်၏အသွင်အပြင်သည်အလိုလိုသိဆုံးဖြစ်သည်, ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအများဆုံးပဏာမအကဲဖြတ်စေရန်အများဆုံးစရိုက်. အသွင်အပြင်အရည်အသွေးထုတ်လုပ်သူရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးကိုရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ပါတယ်.
စမတ်မြို့သည် LED ဗီဒီယိုကြော်ငြာမျက်နှာပြင်နံရံ၏လျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအားပေးသည်